Weerarro ay dad ku dhinteen oo Muqdisho ka dhacay - BBC News Somali
Weerarro ay dad ku dhinteen oo Muqdisho ka dhacay
2 Abriil 2016
Ugu yaraan afar qof ayaa lagu dilay labo weerar oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Weerarka hore ayaa rag hubeysan oo watay gaari waxa ay rasaas ku fureen baabuur uu la socday sarkaal ka tirsanaa ciidamada ammaanka oo marayay degmada Wadajir, waxana halkaasi ku dhintay sarkaalka iyo qof la socday.
Weerarka labaad ayaa waxaa fuliyay rag hubeysan oo gaari watay, kuwaasi oo rasaas ku furay baabuur ay la socdeen xubno ka tirsan ciidamada ammaanka oo marayay degmada Boondheere, waxaana halkaasi ku dhintay laba askari iyadoo tiro kalena ku dhaawacmeen.
Ma jiro wax wara oo ka soo baxay laamaha ammaanka ee dawladda hayeeshee waxa weeraradan sheegtay Al-Shabaab.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa toddobaadyadii la soo dhaafay ka dhacayay weerarro qorsheysan oo lagu bartilmaameedsanayo ciidammada iyo shaqaalaha dowladda.
Talaadadii la soo dhaafay ayey aheyd markii ciidammada ammaanka ee Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo la doonayay in lagu qarxiyo goob aan la cayimin oo ka tirsan caasimadda.